Politika – fanilo
Manda ho an'ny firaisankinam-pirenena: "Tafita ny fanilo."
Mitana andraikitra lehibe eto amina��ny Firenena ny resaka fifidianana. Fototra iray mampisy fitoniana anefa ny fametrahana ny lalA�m-pifidianana, mba tsy hisiana��ny korontana eto amina��ny tany sy ny fanjakanaa��
Hanana kandidA� tokana ny Armada amina��ny fifidianana 2018
Samy manana ny fomba fijeriny amina��ny ilay volavolan-dalA�na momba ny fifidianana ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny hita, miankina amina��ny fironana��ilay antoko no mahamety na tsia ilay volavolan-dalA�na ity, izay marihina fa efa eny anivona��ireo Komity iombonana��ny minisitera.
Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana: Hiezaka hampangarahara ny lisitra
Miaiky ny avy eo anivona��ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Ceni amina��izao fotoana izao fa mbola be ny lesoka tokony hoharenina eo amina��ny fipetraky ny lisi-pifidianana eto amintsika. Mitaky fiaraha-mientana izy ireo na dia eo aza ny fanohanana ara-bola azo momba ny resaka fifidianana...
Niteraka adihevitra ny momba ny LalA�mpanorenana
Hasina��ny fahefam-panjakana: Mila averina haingana, hoy Ranjatohery Harilala
Ny famerenana haingana ny hasina��ny fahefam-panjakana mba hisy dikany hoe misy fanjakana afaka mampihatra ny lalana velona eto ary manana ny sazy tandrify izany no vahaolana amina��izao zava- misy eto amina��ny firenena izao, hoy ny mpanabe no sady mpandinika tantara, Ranjatohery Harilala.